YEYINTNGE(CANADA): Saturday, March 10
သိန်းထောင်ချီစားတဲ့ဦးကျော်ဆန်းဌာနအကြောင်းပါတဲ့The Voice _ 8 - 13 ( March 12 - 18)ဖတ်လိုလျှင်
The Voice _ 8 - 13 _ 2012 March 12 - 2012 March 18
Credit to skyblue(မြနမာကျူ့ ပစ်)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/10/20120အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘီးလင်းမြို့ ၊ ဝေါမြို့ ၊ စစ်တောင်းတံတား၊ သထုံမြို့ ၊ကျိုက်ထိ်ုမြို့ ကိုဖြတ်သန်းစဉ်
သွားသွားလာလာပါပဲ၊ ရဲတွေလည်းအေးဆေးထိုင် ဘာကိုတားထားမှန်းမသိဘူး။ လှိုင်သာယာစက်ရုံနားမှာပါ။
ဓာတ်ပုံ။ ။ ကိုသံချောင်း ..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်အားတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရန် strand hotel ရှေ့တွင်စောင့်စားနေသော မော်လမြိုင်လူထု
Kyaw Soe Moe facebook Mobile Uploads at mawlamyine
ကိစ္စက ထိပ်ဝ ရောက်နေသူများအတွက်သာ....
Ah Ba Yah facebook
အသစ်ဗျို့ အသစ် !!!!
အရင်ကအဟောင်းမဟုတ်ဘူးနော် ! ဘိုထိုင်လေးနဲ့ ။။
ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမဘေးကိုရောက်ရင် အသစ် ၂ လုံးဒီလိုတွေ့ရမယ် ။
ကိစ္စက ထိပ်ဝ ရောက်နေသူများအတွက် ။ ( အပေါ့ပဲနော် ။ အလေးမရဘူး )။
လုပ်တော့ပေးရှာသားးးးးးးးးးးးးးးးးး ရှူးတေ့ဖို့ ။
(ရည်ညွှန်း-ကြေးမုံ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၂၀၁၂)
မော်လမြိုင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောမယ့်နေရာ
Kyaw Khant facebook
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့မှာ လာမယ့် ၁၀/၁၁ ရက် တွင် ကျင်းပမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟောပြောမယ့်နေရာ က ၆မိုင် ဘော်လုံးကွင်းနေရာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်လမြိုင်သူ မော်လမြိုင်သားတွေ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့အမေစုကို ကြိုဆိုကြပါ...စို့
The Tokyo Electric Power Company (Tepco) President Masataka Shimizu has apologised to local residents evacuated from around the nuclear plant
by Political Prisoner on Saturday, March 10, 2012 at 12:10am ·
ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာတွေကတော့ သမ္မတကြီးပြောတာတွေကော ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတာတွေကော ကြားနေရတာပါ၊ အောက်ခြေမှလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလည်း မီဒီယာကနေတဆင် ကြားသိမြင်တွေ့နေရပါတယ်၊ နေပြည်တော်မှာ စည်းရုံးဟောပြောဖို့အတွက် ကွင်းမရဘူး၊ ဟောအခုခွင့်ပြုလိုက်ပြီတဲ့၊ နောက်မန္တလေးမှာကွင်းမရဘူး၊ ဟောအခု ရသွားပြန်ပြီဆိုဘဲ၊ နေရာတိုင်းမှာ အထက်ကသမ္မတကြီးတို့ က အမိန့်ထုတ်လိုက်၊ အောက်ခြေက တားချင်ရင်တားလိုက်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုနားလည်ပေးရမှာလဲ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးတော့ ဥပဒေအတိုင်းပြောတော့ ခွင့်ပြုတယ်ဆိုဖြစ်ပြန်ရော၊ နောက်နေ့ကျတော့ ကော်မရှင်က နေပြီးတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့အားကစားကွင်းတွေကို အသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ဘူးဖြစ်ပြန်ရော၊ သရေပင်လို ခွင့်ပြုတဲ့ဒီမိုကရေစီလားဆိုတာကိုမေးရမလိုဖြစ်နေပါတယ်၊ အောက်ခြေကအာဏာကိုအလွဲသုံးတယ်၊ အပေါ်က ဥပဒေကိုလက်တလုံးခြားလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ အနှေးနဲ့အမြန် အကောင်းဘက်ကိုဦးမတည်နိုင်ဘူးဆိုတာသတိပေးချင်ပါတယ်၊ ပြည်သူတွေအကြောင်းကိုသိချင်ရင် ပြည်သူတွေကြားထဲကို လက်တွေ့ဆင်းကြည့်ပါ၊ မျက်နှာလွှဲပြီး ပြည်သူတွေအကြောင်းကို ငါအသိဆုံးပါဆိုပြီးလုပ်နေရင်တော့ အဲဒီသူဟာ အမှန်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိသေးဘူးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်၊ ဒါကြောင့် လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ပြည်သူ့အတွက် နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်များတကယ်ဆောင်ရွက်ချင်ရင်တော့ ပြည်သူကြားထဲကို လက်တွေ့ဆင်းပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အသံကို ကိုယ်တိုင်နားထောင်ပြီးမှ လုပ်ကြကိုင်ကြဖို့လိုပါတယ်၊ ဥပဒေဆိုတာ လက်တလုံးခြားလုပ်လို့ တိုင်းပြည်မတိုးတက်ပါဘူး၊ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်လို့လည်းတိုင်းပြည်မတိုးတက်ပါဘူး၊ နစ်နာစရာရှိရင် ကျောမွဲအခြေခံလူတန်းစားများသာနစ်နာတာမို့ သတိထားဆင်ခြင်ကြဖို့လိုကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။
by Swe Swe Kyi on Saturday, March 10, 2012 at 3:30am ·
ဒီပဲယင်း တရားခံ စက်မှု(၁) ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ စံအိမ်တော်အကြောင်း (http://www.demowaiyan.co.cc/2010/07/generals-and-their-relatives-watchers.html
အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေ မှတ်ပုံတင်ပြီး တရားဝင် ထောင်နိုင်ပြီ။
(ရည်ညွှန်း-ကြေးမုံ၊ မတ် ၁၀၊ ၂၀၁၂)။
ကိုတင်အေး.. စနေသား.. စိတ်ကြီးတယ်..
လာမယ့် ဧပြီ(၁)ရက်နေ့ မှာကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ
NLD ပါတီက ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် စစ်ကိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ 
လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစောလှိုင်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်း၊
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မဲဆန္ဒနယ်က တစည ပါတီ
ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါ်စန္ဒာမြင့်တို့ နှစ်ဦးကို
မြို့ နယ်အဆင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွေက ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ 
နိင်ငံသားဖြစ်မှုမှာ ငြိစွန်းမှုရှိတယ်လို့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပယ်ချခဲ့ ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစောလိူင်ဟာ ၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ
NLD ပါတီကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရာမှာ ရွေးချယ်ခံခဲ့ရဖူးပါတယ်။
ထို့ အတူ တစည ပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်စန္ဒာမြင့်ဟာလည်း
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရန်ကုန်တိုင်း၊ လမ်းမတော်မြို့ နယ်မှ
တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် တစည ပါတီကဘဲ
၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး ပြိုင်ဘက်ကြံ့ဖွံ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ်ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရ
ဖူးပါတယ်။ ဒေါ်စန္ဒာမြင့်ဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းက
၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ လက်ရှိတည်ဆဲ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်
ဥပဒေနဲ့ ဘဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အခု ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမှ
ကိုယ်စားလှယ်အရည်အချင်း မပြည့်မီသူအဖြစ် ပယ်ဖျက်ခံရတာဟာ
ရှေ့ နောက်မညီညွတ်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။
၁၉၉၀ ပါတီစုံရွေးကောက်ပွဲမှာတုန်းက ၀င်ရောက်ရွေးချယ်ခံမည့်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွမြှာတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏
မိဘနှစ်ပါးသည် နိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်ဟု တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို သတ်မှတ်တဲ့အထိ ဦးစောလှိုင်နဲ့ ဒေါ်စန္ဒာမြင့်တို့ ဟာ သတ်မှတ်
အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီး သူတို့ ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာ
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ဖာယ်ကို ဖွင့်ဆိုရာမှာတော့ ၂၀၁၀
တုန်းက ကော်မရှင်ရဲ့ သတ်မှတ်တဲ့စံနှုန်းနဲ့ယခု ကြားဖြတ်
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကော်မရှင်ရဲ့ သတ်မှတ်စံနှုန်းဟာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။
ယခု ကြားဖြတ်မှာတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ မိဘနှစ်ဦးစလုံးဟာ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမွေးဖွားချိန်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်နေရမယ်လို့ 
စံနှုန်းကို တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခဲ့လို့အခု NLD ဦးစောလှိုင်နဲ့တစည
ဒေါ်စန္ဒာမြင့်တို့ ဟာ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် တစည ပါတီက ဒေါ်စန္ဒာမြင့်အနေနဲ့အဆင့်ဆင့် အယူခံတင်ရာမှာ
တိုင်းကော်မရှင်အဆင့်က ပယ်ချခဲ့လို့၉- ၃- ၂၀၁၂ ရက်နေ့ညနေ ၃း ၀၀
နာရီမှာ တစည ပါတီ တိုင်းရုံးခန်းရှိရာကို ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ ပါတီဝင်များ၊
သတင်းစာနယ်ဇင်းများကို ဖိတ်ကြားပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာမှာ
သတင်းသမား (၄၀)ဦးခန့် တက်ရောက်ပြီး သတင်းရယူခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီ ရှင်းလင်းပွဲမှာ တစည ပါတီမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု
သတ်မှတ်ရာမှာ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ သတ်မှတ်ချက်များနဲ့ 
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ သတ်မျတ်ချက်များဟာ ကွဲလွဲခြားနားမှုများ
ရှိနေကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသည် ပင်မဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံ
(Suppotting Law) သာ ဖြစ်သည့်အတွက် ဖွဲ့ စည်းပုံဥပဒေ၏ နိုင်ငံသား
သတ်မှတ်ချက်အဓိပ္ဖာယ်ကိုသာ ယူသင့်ကြောင်း၊ ဤ ကိုယ်စားလှယ်
ပယ်ဖျက်ခံရမှုကိစ္စကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ 
ဆက်လက်တင်ပြထားပြီး အမျိုးသားအခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့ လည်း
ပေးပို့ တိုင်ကြားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ပိုင်း ကျင်းပဦးမည့်
ရွေးကောက်ပွဲ အသီးသီးတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ပါတီများမှ
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ပါ ရည်ရွယ်ပြီး လွှတ်တော်အတွင်း
တစည ပါတီ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကာယကံရှင်ဒေါ်စန္ဒာမြင့်မှ
ရန်ကုန်တိုင်း တစည ပါတီရုံးခန်း၌ အချိန် (၃)နာရီကြာမျ
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ မူဝါဒအရ ပြောင်းလဲမှု
မရှိဘဲ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အဓိကတာဝန်ရှိသူလို့ 
ဆိုနိုင်မယ့် ဥက္ကဌ (လူ) အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်လို့ 
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘီးလင်းမြို့ ၊ ဝေါမြို့ ၊ စစ်တော...
ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်အားတွေ့ဆုံခွင့်ရရှိရန် strand hote...
အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေ မှတ်ပုံတင်ပြီး တရားဝင် ထောင်နိုင်...